Ball Ball agba Manufacturers, Suppliers - China Ball Iburu Factory
● Deep uzo bọl bụ otu n'ime ndị kasị ọtụtụ ebe ada Rolings biarin.
● Low esemokwu nguzogide, elu na-agba.
● Ọdịdị dị mfe, dị mfe iji.
A-lied Ejiri na gearbox, akụrụngwa na mita, moto, ngwa ụlọ, igwe ọkụ ọkụ n'ime ala, ụgbọ ala okporo ụzọ, akụrụngwa akụrụngwa, igwe ihe eji arụ ọrụ, igwe ihe eji eme ihe, igwe na-atụgharị ala, bọọlụ yo-yo, wdg.
● Single n'usoro miri uzo bọl biarin, inyefe biarin bụ ndị kasị nnọchiteanya Ọdịdị, a dịgasị iche iche nke ngwa.
● Mgbu esemokwu dị ala, nke kwesịrị ekwesị maka ngwa chọrọ ntụgharị ọsọ ọsọ, obere mkpọtụ na ịma jijiji.
Ndị isi na-eji ụgbọ ala, eletriki, ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche.
The imewe bụ ihu ọma ahụ dị ka nke otu ahiri miri uzo bọl biarin.
E wezụga na-ebu radial ibu, ọ nwekwara ike ibu axial ibu eme na abụọ ntụziaka.
Ezigbo kọmpat n'etiti ịgba ọsọ na bọọlụ.
Width Nnukwu obosara, ikike buru ibu.
● Nanị dị ka oghere na-emeghe ma na-enweghị akara ma ọ bụ ọta.
● A na-ejikarị ịnakwere ibu radial, mana nwekwara ike iguzogide ụfọdụ ibu axial.
● Mgbe nkedo nke radial nke ihe nkedo ahụ na-abawanye, ọ nwere ọrụ nke kọntaktị kọntaktị angular.
● Ọ nwere ike ibu nnukwu axial ibu na adabara maka elu na-agba ọrụ.
● Bụ mgbanwe na-amị nke miri uzo bọl amị.
Ọ nwere uru nke usoro dị mfe, oke ịgba ọsọ na obere mgbagha.
● Nwere ike ibu ibu radial na axial n'otu oge.
● Nwere ike ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ.
Nnukwu kọntaktị ahụ ka buru ibu, nke ka elu nke ike axial.
● Nwere ike ibu ibu axial n'otu uzo.
● A ga-etinyerịrị abụọ abụọ.
Ọdịdị nke nkedo kọntaktị nke okpukpu abụọ nke okpukpu abụọ bụ otu ihe ahụ dị ka nke na-agba bọl kọntaktị otu-ahiri, ma ọ dị obere oghere axial.
● Nwere ike ibu ibu radial na ọrụ axial na-arụ ọrụ na ụzọ abụọ, ọ nwere ike ịkwụsị njedebe axial nke osisi ma ọ bụ ụlọ dị n'akụkụ abụọ, Angle kọntaktị bụ ogo 30.
A-● Na-enye nhazi dị ike nke siri ike, ma nwee ike iguzogide iyi ọkụ.
Used A na-ejikarị ya eme ihe na ihu ihu nke ụgbọ ala.
A-contact contact contact four-contact bearing contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact contact separated separated separated separated separated separated separated separated separated of of also also
Na otu ahiri na abụọ n'usoro angular kọntaktị bọl agba ọrụ, elu na-agba.
● Ọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe a kpụrụ isi ihe abụọ ị ga-akpọtụrụ.
● N'ozuzu, ọ kwesịrị ekwesị maka nnukwu axial ibu, nnukwu axial ibu ma ọ bụ ọrụ ọsọ ọsọ.
● Ọ nwere otu ọrụ ntanye dị ka akpaaka na-etinye onwe ya na bọlbụ
● Ọ nwere ike ibu ibu radial na ibu axial n'akụkụ abụọ
Capacity Nnukwu ikike radial ibu, kwesịrị ekwesị maka ibu dị arọ, ibu ọrụ
Njirimara ya bụ na mgbaaka mgbanaka mgbanaka dị n'akụkụ yana ọrụ na-arụ ọrụ akpaka